Top 5 Loại Chăn lông cừu tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Loại Chăn lông cừu tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Loại Chăn lông cừu tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ubusika yisikhathi sezulu esibandayo, sidinga ukufudunyezwa kangcono lapho ulele. Yingakho abantu behlala befuna ingubo yokulala efudumele ukuze bahlangabezane nokulala okuphelele nokunethezeka.
Enye yezingubo zokulala ezithandwa kakhulu nezisetshenziswa namuhla izingubo zoboya. Uma futhi ufuna ukufunda okwengeziwe ngalo mkhiqizo, sicela uhlanganyele nathi ngesihloko esingezansi!
Hlobo luni lwengubo yoboya obuhle?
1 Mayelana nezingubo zokulala
2 Yiziphi izinhlobo zezingubo zokulala ezikhona?
3 Indlela yokukhetha ukuthenga izingubo zoboya bezimvu ezinhle nezisebenzayo
3.1 Khetha umkhiqizo othembekile
3.2 Ukukhetha izithako
3.3 Ukukhetha isisindo
4 Izingubo ezi-5 ezihamba phambili zoboya bezimvu namuhla
4.1 Cha 1. I-Kirkland Queen Push Blanket
4.2 No 2. Ingubo Yoboya Yokugcina
4.3 Cha 3. Ingubo yoboya be-Cashmere
4.4 No 4. Ingubo ye-Monte Jardin Fleece
4.5 Cha 5. Ingubo yoboya be-Nekio
5 Indlela engcono kakhulu yokulondoloza izingubo zoboya
Mayelana nezingubo zokulala
Izingubo zokulala into eklanywe ngengxenye eyinhloko yoboya nezinye izithako ezifana noboya noma i-polyester ezolukwa. Umkhiqizo oqediwe usiza ukugcina ukushisa kahle, ukudala ukufudumala okuphelele ebusika obubandayo. Lona umkhiqizo ophelele ongawusebenzisa esimweni sezulu esibandayo, oqinisekisa ukulala okugcwele nokunethezekile.
Ngokuvamile, izingubo zoboya bezimvu zizoba lula kodwa zifudumale futhi zigcine ukushisa izikhathi eziningi kunezingubo zokulala ezivamile. Enqubweni yokusebenzisa noma yokulondoloza ingubo, azikho izenzakalo ezinjengokulahlekelwa izinwele, ukufiphala kombala, njll. Ngakho-ke, abathengi manje bakwazisa kakhulu ukuqina kwezingubo zoboya.
Yiziphi izinhlobo zezingubo zokulala ezikhona?
Njengamanje emakethe kunezinhlobo ezimbili zezingubo zokulala ezihlanganisa nezingubo zoboya bemvelo kanye nezingubo zokulala zokwenziwa. Uhlobo ngalunye luzoba nokwakheka okuhlukile kanye nezinzuzo kanye nokubi, futhi izindleko zalezi zinhlobo ezimbili zizohluka kancane lapho kuthengwa.
Ingubo yoboya bemvelo: Umkhiqizo wenziwe ngoboya bangempela, ngakho buhlala bufudumele, ngaphandle kokuguqulwa noma izigaxa isikhathi eside uma usetshenziswa. Ukuqina komkhiqizo kungase kube amashumi eminyaka, kodwa ukunakekelwa kuzoba nzima kakhulu ngoba ungakwazi ukuwomisa ukuwuhlanza ukuze ugweme ukuthikameza ukuqina kwawo. Ngaphezu kwalokho, intengo nayo ibiza kakhulu, cishe izigidi ezimbalwa zama-dong lapho uthenga umkhiqizo.
Ingubo yoboya bokwenziwa: Lo mkhiqizo usebenzisa izithako ezifana nemicu yepulasitiki kanye nemicu efana ne-Polyester ukusiza ukuletha umkhiqizo ongekho ngaphansi kwezingubo zokulala zoboya bemvelo. Imikhiqizo ingagcinwa kalula, intengo futhi ishibhile, ilungele izingxenye eziningi zamakhasimende. Amanani asukela kumakhulu ambalwa ezinkulungwane ukuya ngaphezulu kwesigidi sama-dong.
Indlela yokukhetha ukuthenga izingubo zoboya bezimvu ezinhle nezisebenzayo
Emakethe yaseVietnam, izingubo zokugqoka zoboya zithengiswa ezinhlobonhlobo zemiklamo, izinhlobo kanye nezinto zokwakha. Ngakho-ke, abantu bazozizwa bedidekile futhi bephathwa yikhanda uma bengazi ukuthi bangayithenga kanjani imikhiqizo abazoyisebenzisa. Ngokuqonda lokhu, sihlanganise uhlu lwezindlela ezisebenza kahle kakhulu zokukhetha nokuthenga imikhiqizo ukusiza abantu bafake izicelo ngempumelelo lapho bethenga.
Xem Thêm Top 5 gối massage tốt nhất cho bạn những giấc ngủ ngon và thư giãn | Muasalebang
Khetha umkhiqizo othembekile
Isici sokuqala lapho uyothenga ingubo yoboya bezimvu ukuthi umkhiqizo ukhiqizwa uhlobo lwangempela noma cha. Imikhiqizo ekhiqizwa amabhrendi ahamba phambili izohlangabezana nekhwalithi ephezulu kanye nokuqina kwesikhathi eside uma isetshenziswa. Njengamanje, kunemikhiqizo esezingeni eliphezulu ngale ndlela elandelayo okufanele uyikhumbule lapho ukhetha ukuthenga njengeYuki, Muji, Morita, Lambo, Ultimate kanye neKirtland.
Njengoba kwabiwe ngenhla, izingubo zoboya bezimvu manje sezihlukaniswe ngezinhlobo ezi-2, okuhlanganisa nezingubo zokulala zemvelo nezingubo zokulala zokwenziwa. Izici zazo zombili izinhlobo zingafudumala kahle, kodwa indlela yokulondoloza nokuqina izohluka kancane. Kufanele uthembele ekusebenziseni kwakho kanye nezidingo zezezimali ukuze ukhethe uhlobo olufaneleka kakhulu.
Isisindo sengubo yoboya siyisici esibaluleke kakhulu lapho ukhetha ukuthenga, ngokuvamile umkhiqizo uzoba nesisindo esingama-4-5 kg. Kuye ngezintandokazi zakho, ungakhetha isisindo esifanele ongasisebenzisa. Kodwa-ke, ngokusekelwe esimweni sezulu saseVietnam, abantu bavame ukukhetha umkhiqizo onesisindo esingaba ngu-4 kg, osiza ukufudumala futhi ungazizwa unzima kakhulu uma usetshenziswa.
Izingubo ezi-5 ezihamba phambili zoboya bezimvu namuhla
Ngemva kokuba sesilutholile ulwazi oluhlobene nengubo yoboya eyabiwe ngenhla, into elandelayo ukufaka ephaketheni imikhiqizo engu-5 ehamba phambili namuhla ethakazelelwa yiwo wonke umuntu ngemva kokusetshenziswa. Ungabheka futhi uzikhethele umkhiqizo esabelana ngawo ngezansi!
Cha 1. I-Kirkland Queen Push Blanket
Umkhiqizo wokuqala wezingubo zokulala zoboya eziphezulu ezi-5 ezihamba phambili namuhla yi-Kirkland Queen Push Blanket. Lo mkhiqizo ukhiqizwa inkampani ehamba phambili yaseMelika “Kirkland”. Njengamanje eVietnam, lena yingubo yoboya yokwenziwa esetshenziswa kakhulu. Uzothola kalula izincomo zabantu ngalo mkhiqizo uma ufuna ukuthenga ingubo yoboya bezimvu.
Ingubo yoboya ye-Kirkland Queen Push Blanket isiza ukufudumala ngokushesha futhi igcine ukushisa isikhathi eside, ikunikeze ukulala okungcono kakhulu nokunethezeke kakhulu lapho uphumule. Uboya buthambile futhi bushelelezi, akubangeli ukucasuka esikhumbeni, ukuqinisekisa ukusetshenziswa okuphephile ngisho nasezinganeni. Nakuba umkhiqizo ugcina ukushisa kahle, umkhiqizo usaqinisekisa ukuphefumula futhi uvimbela isikhunta esiphelele lapho sisetshenziswa. Ukuqina komkhiqizo nakho kuyaziswa kakhulu ngabathengi, ngoba ungasetshenziswa iminyaka eyi-10 ngaphandle kokuchithwa noma ukufiphala.
Kunemibala eminingi ehlukene ongakhetha kuyo, ehlangabezana nobuhle obuphezulu.
Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, eziqinisekisa ukuqina okuphezulu uma isetshenziswa okungenani kunezingubo zokulala zoboya bemvelo.
Ukuhlanza izingubo zokulala kulula kakhulu, zingawashwa ngesandla noma ngomshini.
Intengo isuka ku-800,000 iye ku-1,400,000 VND.
Izingubo zokulala ziyasinda futhi ukuwasha nakho kunzima kakhulu kunezinye izinhlobo. Lapho ugeza kufanele usebenzise amanzi afudumele, angaba ngu-35-45 degrees Celsius.
Xem Thêm Top 10 loại mì gói được ưa chuộng 2022 | Muasalebang
No 2. Ingubo Yoboya Yokugcina
I-Ultimate Fleece Blanket iwumkhiqizo okhiqizwa uhlobo oluphambili lwamaShayina. Umkhiqizo unesisindo esilula, unoboya obuthambile njengevelvet. Kodwa-ke, umkhiqizo usaqinisekisa ukungena komoya, akukho mfihlo yokudala umuzwa onethezeke kakhulu kuwe lapho usebenzisa. Umkhiqizo unezendlalelo ezi-3 ezihlanganisa: Uhlangothi olu-1 uboya bezimvu, uhlangothi olu-1 luyivelvet ethambile kakhulu, phakathi kukhona ukotini we-polyester ukusiza ukugcina ukushisa ngempumelelo.
Uboya obungaphansi bukhulu, bunobukhulu obanele, le nto ayibangeli ugesi omile futhi abuchithi izinwele ngesikhathi sokusetshenziswa. Ukuze ungqimba oluphakathi lwe-cotton padding lwenziwe ngeshidi lekotini le-polyester eliphefumulayo, elibushelelezi futhi elinwebekayo. Ngisho nokugeza akubangeli ama-clumps noma ama-clumps kakotini. Isendlalelo sevelvethi ye-Flaneli yezinga eliphezulu, ethambile kakhulu isiza ukukhulisa amandla okugcina ukushisa komkhiqizo ngaphandle kokudala imfihlakalo. Ngaphezu kwalokho, le ndawo yevelvet iletha ubuhle obuphezulu nokunethezeka kuwe lapho usebenzisa.
Ingubo yokulala inesisindo esingaba ngu-2.5kg, elungele kakhulu izingane. Uma ungathandi izingubo zokulala ezisinda kakhulu, ezibangela ukungakhululeki lapho zimboziwe, lo mkhiqizo ophelele. Ngaphezu kwalokho, inkampani iphinde ikhiqize imibala ehlukahlukene ukuze kube lula kuwe ukuthi ukhethe ngokuvumelana nezintandokazi zakho. Ingubo yoboya obuphelele ilula ukuyinakekela futhi iyihlanze, ingafakwa endaweni yokugeza ngomshini noma ekugezeni izandla.
Izinto ezisetshenziswayo zihlanganisa uboya bezimvu, uboya obuthambile kanye ne-polyester ukotini ukuze kugcinwe ukushisa ngempumelelo futhi kunikeze ukuthamba nokunethezeka okuvelele.
Imibala ehlukahlukene ongakhetha kuyo.
Isisindo esincane, esifanele izingane.
Izindleko eziphansi, ezifanele amasegimenti amaningi wamakhasimende.
Ukuqina akukude kakhulu, cishe iminyaka engama-2-3.
Cha 3. Ingubo yoboya be-Cashmere
Ingubo yoboya be-Cashmere yenziwe nge-polyester yekhwalithi ephezulu engu-100% ukusiza ukuletha ukuphefumula nokulinganisela izinga lokushisa lakho. Impahla yengubo ithambile kakhulu, ukuthinta kuzwakala kushelela njengevelvet. Lona umkhiqizo owenziwe eJalimane, ngakho-ke ungaqiniseka ngokuqina kwawo kwesikhathi eside uma uwusebenzisa. Isisindo somkhiqizo singama-3kg kuphela, mncane kakhulu futhi alula, okunikeza induduzo ephelele.
Umkhiqizo unesakhiwo esinezingqimba ezi-3, okuhlanganisa uboya bokufakelwa, ukotini we-polyester kanye nevelvet ebushelelezi.
Ingubo ikugcina ukushisa kahle, ifudumala ngokushesha kodwa ayidali noma iyiphi imfihlakalo lapho isetshenziswa.
Inkampani ikhiqiza imibala ehlukahlukene, ikusiza ukuthi ukhethe umkhiqizo ofanelana nezintandokazi zakho.
Ingubo yokulala ilula kakhulu ngesisindo futhi ihlala isikhathi eside, okwenza kube lula ukuyihlanza nokuyinakekela.
Kwenziwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje kakhulu bomugqa, okuqinisekisa ukuphepha okuphelele noma ngabe kusetshenziselwa izingane.
Intengo ibiza kakhulu, cishe i-800,000 – 1,100,000 VND.
Ilungele ukusetshenziswa ekushiseni okungaba ngu-20 – 26 degrees.
No 4. Ingubo ye-Monte Jardin Fleece
Xem Thêm Top 5 dòng nước hoa Amouage nam, nữ tốt, hot nhất hiện nay | Muasalebang
Ingubo yoboya be-Monte Jardin ingumkhiqizo womkhiqizo odumile e-US, umkhiqizo unezendlalelo ezi-2 ezihlanganisa uhlangothi lwevelvet nohlangothi loboya. Ingubo isiza ukugcina ukushisa kahle, kodwa iphefumula ngokwedlulele, ingabangeli ukungakhululeki noma imfihlo lapho isetshenziswa. Lona umkhiqizo ofaneleka ngokwedlulele esimweni sezulu onamazinga okushisa angaphansi kwama-degree angu-25, usayizi omkhulu ukhululekile ngokwedlulele. Ngokuqondile, inkampani ikhethe futhi yasebenzisa izinto eziphambili kakhulu ukusiza ukuqinisekisa ukuphepha kwezempilo. Ukuqina komkhiqizo nakho kwaziswa kakhulu ngamakhasimende, nakuba kusetshenziswe isikhathi eside, akuzihlukumezi izinwele futhi kuqinile kakhulu.
Izinto zomkhiqizo ziphephe kakhulu empilweni, azibangeli ukucasuka kwesikhumba.
Ingubo yokulala ayiwugqinsi kakhulu futhi ayincane kakhulu, ilungele isimo sezulu esibandayo. Ihlangothi loboya beboya lithambile futhi libushelelezi, lisiza ukufudumala ngokushesha kuyilapho i-velvet surface igcina ukushisa isikhathi eside, okwandisa ukunethezeka komkhiqizo.
Ingubo yoboya be-Monte Jardin inkulu, ivulekile, futhi ikhululekile ukuyisebenzisa.
Inkampani ikhiqiza ngokucophelela isitishi ngasinye, sihlangabezana nokuqina kwesikhathi eside.
Lapho ugeza ngesandla noma ngomshini, umbala ngeke uphele, ulante noma ugoqeke.
Intengo ibiza kakhulu, cishe i-1,100,000 – 1,800,000 VND.
Izingubo zokulala zinezendlalelo ezi-2 kuphela, ezingagcini ukushisa kanye nezinhlobo zezingqimba ezi-3.
Cha 5. Ingubo yoboya be-Nekio
I-Nekio fleece blanket ikhiqizwa ngohlobo oluphambili e-Japan. Lo mkhiqizo unesakhiwo esinezinhlangothi ezimbili, kufaka phakathi uhlangothi olulodwa loboya ukuze udale umuzwa ofudumele kanye nohlangothi olulodwa lwendwangu yevelvet ukuze udale umuzwa obushelelezi lapho usetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, kukhona ungqimba lukakotini we-polyester wezinga eliphezulu phakathi ukukusiza ukuthi uhlale ufudumele futhi udale umoya wakho.
Lo mkhiqizo ukhiqizwa yinkampani esebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu kakhulu kanye nobuchwepheshe besimanje ukuze kuqinisekiswe ukuqina kwesikhathi eside. Ingubo yokulala ine-antibacterial, anti-mildew futhi ayibangeli ukucasuka kwesikhumba ngisho nalapho isetshenziselwa izingane kanye nabantu abanesikhumba esibucayi. Inqubo yokuhlanza kanye nokunakekela ingubo yoboya be-Nekio nayo ilula, ngaphandle kokuchithwa nokunqwabelana ngemva kokugeza.
Izingubo zokulala zenziwe ngezinto ezihamba phambili, zithungwe ngokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukuqina okuphezulu lapho zisetshenziswa.
Isisindo sengubo singaba ngu-3.6kg, esifanele isimo sezulu kanye nezinga lokushisa eVietnam.
Usayizi wengubo mkhulu impela, ukhululekile ngokwedlulele ukumbozwa.
Inkampani ikhiqiza izingubo zokulala ezinemibala eminingi ehlukene, ungakhetha umbala ngokuya ngokuthanda kwakho.
Intengo ephezulu, cishe i-1,800,000 – 2,500,000 VND.
Indlela engcono kakhulu yokulondoloza izingubo zoboya
Uma usebenzisa izingubo zoboya bezimvu, kufanele usebenzise izindlela zokulondoloza ezilandelayo ukuze uthuthukise ukuqina kwesikhathi eside komkhiqizo.
Uma ukuhlanza okomile ukuze ingubo ihlale isikhathi eside, nciphisa ukomisa, uku-ayina noma ukusebenzisa i-bleach ngqo engutsheni ukuze ugweme ukufiphala.
Phenduka ingubo uyibhekise phansi lapho womisa ukuze uvimbele ukuguga ngaphansi kwemisebe ye-UV.
Gcoba njalo futhi unyakazise ingubo ukuze ugweme ukunqwabelana kothuli, uvimbele ingozi yokukhula kwesikhunta.
Isembozo esifanele kufanele sisetshenziselwe ukunciphisa ukungqubuzana futhi kuthinte impahla yengubo lapho isetshenziswa.
Ngalesi sihloko esingenhla, sisebenze nabafundi ukuze sifunde okwengeziwe izingubo zoboya kanye nokufaka ephaketheni imikhiqizo emi-5 ethandwa kakhulu namuhla. Uma usadidekile, awazi ukuthi yimuphi umkhiqizo ongawukhetha, ongawucabangela Ingubo yoboya ye-Kirkland Queen Push Blanket. Ngoba, lo mkhiqizo uvele uhlangabezane nezindinganiso eziphezulu uma usetshenziswa kodwa unenani elithambile uma kuqhathaniswa, elifanele wonke amakhasimende ezezimali lapho uthenga. Ngokuqinisekile uzoba nesipiliyoni esihle uma usebenzisa lo mkhiqizo!
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-6,460, ukuvakasha okungu-1 namuhla)
[Review] 10 nước tẩy trang cho da nhạy cảm tốt nhất hiện nay | Muasalebang